I-Trovaweb - Isiqalo se-Italian Digital sokuqala
ITrovaWeb Innovative Technological Startup ebhaliswe eSigabeni Esikhethekile se-MISE
Ithuba langempela lokubonakala kwabathengisi, izinkampani, izingcweti namaSME
I-TrovaWeb isiqalo se-100% sase-Italian Young neDynamic owazalwa ePhalamende kwe Ukukhangisa kwewebhu ezinikezelwe ku Izinkampani futhi ungathembela phambili Iminyaka engu-20 okuhlangenwe nakho komhlaba we ukuxhumana Yabaphathi Bayo Nabasunguli.
Kungumsebenzi wokuvelela ohlose ukunikela ukubonakala kuma-Injini Okusesha kwimodi eziphansi futhi esihlangane ngempumelelo enkulu emhlabeni Izinkampaniikakhulukazi SME. Namuhla, I-TrovaWeb iphenduke ingokoqobo Ukujikeleza kwesihleli kahle Izimbobo eziyi-12, ehlanganisa zonke izidingo zokushicilelwa kokuqukethwe kwiWebhu nganoma yiluphi uhlobo lwebhizinisi.
Kepha kunokunye: al Ukujikeleza kwesihleli eyodwa isanda kufakwa Ukwabelana Komphakathiit I-Club TrovaWeb, ezinikezelwe ekwabelaneni nasekuhambiseni okunikezwayo kanye nokufunwa kwezinkampani - Izitolo - Abaqeqeshi kanye nezithameli Abathengi abashukumisayo, inentshisekelo futhi ihlala ivuselelwa yizinyathelo ezishicilelwe endaweni yesikhulumi.
Umqondo wokuba nesilinganiso esiphezulu ukubonakala kungenzeka ekuseshweni okwenziwa abasebenzisi nsuku zonke Injini yokusesha in Imodi Yezindleko eziphansi kanye nekhono lokushicilela okuqukethwe okungenamkhawulo kwi isiteji sokuhlela selaphekile futhi kulula ukuyisebenzisa, lenze iTrovaWeb isifakeli sangempela Izinsiza ze-Web nge- Izinkampani kanye ne professionals ubani oyikhethile. I-TrovaWeb ibanikeza wonke amathuluzi aphumelela kakhulu wokuthuthukisa ibhizinisi labo - imikhiqizo - izinsizakalo e-Italy nasemhlabeni jikelele.
Namuhla iTrovaWeb yinye Ithuluzi lokuqinisa ibhizinisi lakho ezinkampanini eziningi nabachwepheshe abalikhethile futhi kuyaziwa futhi kuyaziswa kulo lonke E-Italy Ukusebenziseka kwayo kuyabonakala ikakhulukazi kubathengi abalisebenzisa nsuku zonke ngokwenza ucwaningo ngalo I-GOOGLE nokubheka imiphumela ephakanyiswe nguTrovaWeb, ebekwe cishe njalo kowokuqala Amakhasi 3 e-Injini Yokucinga.
I-TrovaWeb inikeza izinhlobo ezahlukahlukene ze "Thenga iwindi" yakhelwe futhi yahlelelwa ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zezinkampani, amabhizinisi, amabhizinisi kanye nabaqeqeshiwe. Zonke zinakekele ukunakekelwa kwezici ezihlobene ukuma okuhle nokunakwa kuye Izindinganiso ze-SEO ukuhlonishwa ukuze kuqinisekiswe. Esethu Ukukhonjiswa kweMultimedia zingafinyeleleka kuwo wonke umuntu, ezenziwe ngabasebenzi abangochwepheshe, futhi zanikezwa "okhiye ngesandla" ekhasimendeni elizoyisebenzisa ngokuzimela okuphelele ngokumelene nesondlo esincane kakhulu sonyaka, esikhishwe ngokuphelele enteleni.
Umbukiso Wezinkampani wenziwa ngobuhle Ikhasi lokufika Qedela lonke ulwazi oluphathelene nenkampani oluhambisana nawo wonke amathuluzi awusizo wokunyusa kuwebhu Isimo se-organic ku-Google amandla ethu amakhulu azokunikeza konke Ukubonakala ubuyifuna.
Lapho sicabanga ngeTrovaWeb sicabanga ukwenza iWebhu elula kakhulu kubo bonke labo Amabhizinisi Amancanyana nama-SME ukuthi kwesinye isikhathi, kukhungathekiswa yizindleko ezingatholakali ngaso sonke isikhathi noma ukungabi nalwazi kumkhakha Ukukhangisa kwewebhu, ukulahliwe ukuzikhuthaza ngalezi zindlela zokuxhumana ezingavamile esezenze inhlanhla yabaningi.
Ukunikela qualità njengenani eliphelele kuzo zonke izimo, futhi futhi ikakhulukazi ezinkampanini ezingenazinsizakusebenza ezinkulu, njengoba sisaqiniseka ukuthi ukwethenjwa esinikezwa yikhasimende kuyinani eliphelele elingenakuhlukaniswa kwenzuzo nje, kodwa kuboniswa kangcono ngokusebenzisa Ubuhlobo bomuntu siqu nobungcweti obususelwa ekuthembekeni.
emisha, njengoba sikholwa ukuthi ibalulekile ezweni elinokuncintisana okukhulu njengaleli Ukuxhumana Multimedia ngaso sonke isikhathi funa izisombululo ezintsha ezingahlangabezana nokulindelwe kwamakhasimende futhi zibe nomthelela kunqubomgomo yokuqukethwe kwezindleko Ikhonkolo futhi Iyabonakala.
La obala kusenza sazi ngokuqinile ngamathuba ethu wangempela kanye nabaphikisi ekukhetheni okuhle kakhulu amasu ngayinye qina okwakho Brand. Lokhu kubonakala kwenziwa kumakhasimende ethu ngayo yonke imikhiqizo esiyenzayo.
Usomabhizinisi kanye nemenenja yenkampani
Usomabhizinisi wesifazane iphumelele emkhakheni we-digital, UCaterina Doddis uchwepheshe onolwazi oluningi ngemuva kwakhe emikhakheni ye Ukubalwa kwezimali, kwezokuxhumana kuwebhu, Ucwaningo lwemakethe emkhakheni wezezimali. Namuhla, ungumphathi nomphathi we I-StartUp Innovative Technological TrovaWeb, ethembisa iqiniso langempela laseSisilia Messina, esivele yaziwa ezweni lonke ngezinsizakalo zayo ezithuthukile ukubonakala inthanethi.
Umjikelezo Wokuhlela we-TrovaWeb usezinsizakalweni zezinkampani kanye nabathengi
TholaWeb, kanye nakho konke Umjikelezo Wokuhlelwa Kwedijithali, namuhla ingenye ethembekile kunazo zonke izingxenyekazi zesiphambano Kunikezelwa emhlabeni izinkampani kanye nonkulunkulu professionals naphakathi kwabathengi abavakashelwa kakhulu abazikhethela ikhwalithi yokuqukethwe, ukusetshenziswa kalula kanye nokuphelele kwemininingwane.